Ma mp3 gali kartaa in YouTube?
Sidee baan ku gali kartaa MP3 An in YouTube?
> Resource > Video > Sidee ayaan u gali kartaa MP3 An in YouTube?
First of dhan, waxaad u baahan tahay in la fahmo in YouTube waa boosteejo ah oo keliya warbaahinta video. Taasi waxay sabab u qaabab file MP3 ma taageersana sababtoo ah nooca file MP3 ah waa nooc ka mid ah mid aad caan u ah oo weel isticmaalay ku kaydiso files audio kaliya. Sidaas ma aha la yaab lahaa oo dhan in laydiin celin oo fariin qalad ah oo sheegay in files aan loo taageeray marka aad isku daydo in ay geliyaan file MP3 ah in YouTube.
Markaasay aad u jeedsan lahaayeen hareeraha iyo dhihi sida soo jiraan wax badan oo files audio ka helay on YouTube? Mid fiican! Waxaan ka jawaabi karaa oo keliya aad ku salaysan waxa aan ogahay ama maqlay off ilaa iyo haatan. Waxaa sidoo kale iyada oo intaa ku dartay image ama sawir u files audio (markaas badbaadin sida file video) ama ay diinta kuwa MP3 files qaab ku habboon file in la aqbalo by YouTube. Habka ugu sahlan waa in ay u badalo oo isticmaalaya Wondershare Video Converter Ultimate si aad u haboon gali kartaa file MP3 ah in YouTube.
Ka hor inta aan in, waxaad isku dayi kartaa in la abuuro file video ka soo baxay oo MP3 isticmaalaya Windows Movie Kan sameeyey, haddii aad iska leh computer ah in ay maamushaa labada Windows XP ama Vista. Taasi waa sababtoo ah Windows Movie sameeyey uu ka hor-rakibay gal kombiyuutarada kuwa. Marka aad ku daray image ah in aad file MP3, hubi in aad u dhigma sawir ama image dherer mar audio ama kale doonnaa in aad u badan tahay heli faylka si guul uploaded ma uu awoodi doono inuu ciyaaro song oo dhan.
Fiiro gaar ah : Hadda, YouTube taageeraan oo kaliya ka dib markii qaabab file, MOV, MP4, wmv, AVI, WebM, FLV, 3GPP iyo MPEGPS. On top of in, si loo hubiyo in ka kooban yahay ma Universal Music Group (UMG) xuquuqdiisa, ama haddii kale waxa ay la xakameeyo.
Haddii aad jeceshahay inaad ku beddelato MP3 files si toos ah gashid intii adigoo in ay dhex maraan niyad suurto gal ka Kan sameeyey Windows Media, kaliya rakibi Converter Video ah Ultimate oo raac talaabooyinka hoos ku qoran:
1 Jiid-iyo-hoos u MP3 faylasha
Haddii aad leedahay dhowr ah oo MP3 files in loo baahan yahay in la badaley, kaliya iyaga oo dhan jiidi mar sababtoo ah Video Converter Ultimate this ha badalo ku yaalla.
2 Beddelaan iyo geliyaan MP3 files si ay u YouTube
Qaabka wax soo saarka ee kala duwan oo ay taageerayaan noqon kartaa fiirin-up ka menu hoos-hoos hoygaaga Qaabka Output . Si loogu badalo file MP3 ah u YouTube, kaliya dooro YouTube Video , ka dibna ku dhufatey badalo button.
Fiiro gaar ah : Waxaad sidoo kale soo saaro karaa oo kaliya audio ka wax video files in aad qabto ka dibna u badalo for uploading gal YouTube.
3 Taasi waa! Kaliya 2 talaabooyin fudud, aad dhab ahaan ma filan muddo aadan sameyn?
Ku bilow adiga oo Uploads cusub ee ku saabsan YouTube qoyskaaga iyo saaxiibadaa la wadaago!
Video Cropper u Mac: Sida loo Dallaga Video ku Mac (Yosemite mid)
Sida loo Beddelaan MP4 on OS X Mavericks